Pliocene fauna: njirimara, iche iche na mgbanwe | Network Meteorology
La Oge Pliocene bụkwaruphu onye Oge Neogene nke Oge Cenozoic. Ọ malitere ihe dịka 5.5 nde afọ gara aga wee kwụsị nde afọ 2.6 gara aga. Oge a enweela ezigbo mkpa na mmepe nke hominids mbụ na flora na fauna nke ụwa dum. Na Ihe ọkụkụ Pliocene malitere ịnọ na mpaghara dị iche iche na-ejedebe na ọnọdụ ihu igwe nke oge ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, enwere ọnọdụ a ruo taa.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, ụdị ndụ dị iche iche na mmalite nke ụdị osisi Pliocene.
1 Mgbanwe na oge Pliocene
2 Ifuru na osisi faịlị
3 Anụmanụ nke Pliocene
4 Anumanu ndi ozo
Mgbanwe na oge Pliocene
Ọ bụ ihe dị ka oge ekele ekele maka ihe ochie ndị mbụ o kwere omume ịmata na hominid mbụ biri na mbara ụwa a, Australopithecus, biri na mpaghara Afrika. Oge a abụrụla mgbanwe dị ukwuu n'ogo nke ihe dị iche iche dị ndụ, ma ahịhịa na ahịhịa. Osisi ndị ahụ malitere ịgbasa na mpaghara dị iche iche na njedebe nke ihu igwe. Mkpokọta oge nke Pliocene bụ ihe dị ka nde afọ 3.
A nnukwu ego nke mgbanwe ndị a na iche iche na mpaghara nke nkesa nke osisi na anụmanụ malitere ha miri emi ma dị mkpa mgbanwe na aru nke mmiri na mbara ala. Ma ọ bụ n’oké osimiri dị iche iche gbanwere n’oge a. Oge ezumike dị n'etiti nkwurịta okwu dị n'etiti Atlantic Ocean na Pacific Ocean. N'ihi mgbawa a, ihe anyị maara taa dịka Isthmus nke Panama bilitere. Ejiri mmiri si n'Oké Osimiri Atlantic jupụta Oké Osimiri Mediterenian ma mechie nsogbu a na-akpọ nsogbu nnu nke Mesaya. Nsogbu a na-ezo aka oke nnu dị na Oke Osimiri Mediterenian n'ihi mmechi nke Strait nke Gibraltar.
Dika mmiri nke uzu oku na abawanye na obere ya, njuputa nnu nnu kariri rue na o nweghi ike ikwusi anumanu na ndu. Site n'iwebata mmiri ọhụrụ site na Atlantic, enwere ike iweda ọkwa nnu dị ka ebe siri ike.
N'ikpeazụ, otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa evolushọn nke oge Pliocene bụ ọdịdị nke hominids mbụ. Australopithecus bu ihe ndi ozo no na mmalite nke umu mmadu. Ọ bụ ụdị nke mbụ nke genus Homo.
Ifuru na osisi faịlị
N’oge a, osisi ndị a mụbara n’ihi mmụba nke okpomoku zuru ụwa ọnụ. Osisi ndị toro eto kachasị bụ ala ahịhịa. Okpomoku juru ebe niile n’oge a pere ezigbo mpe kemgbe glaciers gbasaa ebe sara mbara. Ọ bụ ezie na ọnọdụ okpomọkụ dị ala sara mbara n'ọtụtụ ebe sara mbara, enwerekwa ahịhịa na-ekpo ọkụ nke oke ọhịa na oke ọhịa na-anọchi anya ya. Agbanyeghị, mpaghara ndị a nwere oke ọhịa bụ naanị mpaghara mpaghara ụwa ebe ọnọdụ ihu igwe ka mma dị.
Maka mpaghara ndị ọzọ nwere okpomoku dị ala, ala ahịhịa nwere ike ịchị mpaghara ndị ahụ. N'ihi mgbanwe mgbanwe ihu igwe nke dị n'oge a, nnukwu mpaghara ala akọrọ nwere ike ịpụta nke ghọrọ ọzara. Offọdụ nnukwu ọzara ndị a ka juru ebe niile taa. Na mpaghara dị n'akụkụ okporo osisi ahụ, e guzobere flora ma dị taa. Osisi a bu conifers. Conifers bụ osisi nwere nnukwu ikike iguzogide obere okpomọkụ ma tolite na gburugburu oke njọ.
Biome nke kachasị gbasaa n'oge a bụ tundra. Tundra dị otu a ruo taa ebe ọ bụ na achọtara ala ndị nwere oke ala na mpaghara ugwu.
Banyere anụmanụ nke Pliocene, anyị na-ahụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na mmepe nke mmadụ. Ma obu na mbu hominid amara dika Australopithecus ka emeputara. N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ nnukwu mmepe na iche iche nke mammals n'ihi oke mgbanwe ha. Anụmanụ nwere ike ịgbasa site n'ọtụtụ ebe ma gbanwee ọnọdụ dị iche iche.
Ọ bụ ezie na ụdị anụmanụ ndị ọzọ na-enwetakwa mgbanwe ụfọdụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa na usoro evolushọn, ọ bụ anụmanụ na-akpata ara malitere ihe kachasị.
Anụmanụ nke Pliocene
Anụmanụ malitere ịba na mpaghara ndị kwụsiri ike taa. Otu agbụrụ oge ochie nke anụmanụ na-enye ara ara bụ onye njirimara ya bụ ijegharị na-akwado na mkpịsị aka aka bụ ndị na-enweghị nchebe. E nwere ụdị dị iche iche nke otu anụmanụ a wee malite ịfufu aka na ala. Agbanyeghị, na mpaghara ndị ọzọ, ha jisiri ike imeghari ma zụlite n'ọtụtụ ebe. Anyị na-ekwu maka kamel na ịnyịnya. Mkpịsị aka na-ekpuchi mkpịsị aka nke anụmanụ ndị a.
Otu umu anumanu ndi ozo meputara n'oge a bu proboscideans. Ọ bụ ìgwè ụmụ anụmanụ ndị kachasị njirimara ha bụ ịgbatị ihu ha. A na-akpọ ndọtị a proboscis. N'ime umu anumanu nke Pliocene enwere otutu ihe ntule nke otu a dika enyí na stegodons. N'ime anụmanụ abụọ a, ọ bụ naanị enyí ka dị ndụ ruo ugbu a.
N'etiti anụmanụ ndị na-enye anụmanụ, anyị na-ahụkwa òké nke njirimara ha bụ ezé ezé ezé. Ezé ezé ndị a dị mma maka ịta ụra na osisi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ma na-eri nri na ya. Ha bụ quadruped na ịdị iche na nha. Ekwuru na ha gbara ọsọ site na mpaghara ndị dị na kọntinent Europe.
Australopithecus Ọ bụ ihe mbụ hominid nwere ike ịmegharị ụkwụ. Ọ bụ maka inwe ike ịga ije n’elu ụkwụ abụọ a. Nha ya pere mpe ebe ọ bụ naanị ya dị otu narị mita na iri atọ n’ogologo ma nwekwa ọmarịcha ụlọ. Nri ya juru ebe niile ma nwee ike ịba ọgaranya na kọntinent Africa bụ ebe a hụrụ ọtụtụ n'ime ihe okike taa.
Anumanu ndi ozo
Umu anumanu ndi ozo meputara nke oma n'oge oge Pliocene. Anụmanụ na-akpụ akpụ nwere nnukwu mmepe, ọkachasị agụ iyi na agụ iyi. Banyere nnụnụ, ọtụtụ ndị bi na kọntinent America ma na-eri anụ nke ọtụtụ ụmụ anụmanụ. Ìgwè nnụnụ ọzọ a maara nke ọma dị ka anseriformes bụ ndị mepụtara n'ọtụtụ ebe. N'ime otu nnụnụ a, anyị na-ahụ ọbọgwụ mmiri na swans, n'etiti ndị ọzọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ Pliocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Anụmanụ Pliocene